Tallaal looga hortegayo Cudurka COVID-19 oo Maanta la keenay Muqdisho | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Tallaal looga hortegayo Cudurka COVID-19 oo Maanta la keenay Muqdisho
Tallaal looga hortegayo Cudurka COVID-19 oo Maanta la keenay Muqdisho
Garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho ayaa waxaa Maanta kasoo degtay diyaarad sida tallaalka Oxford/AstraZeneca ee Cudurka halista ah ee COVID-19 oo gaaraya 108,000 Shixnad oo tallaal ah.
Tallaalkan ayaa waxaa dowladda Soomaaliya ugu deeqday Dowladda Faransiiska, waxaana loo soo marisay xarunta COVAX (CEPI, Gavi, UNICEF, WHO), iyadoona Garoonka ay kula wareegeen Mas’uuliyiin ka tirsan Wasaaradda Caafimaadka Xukuumadda.
Qoraal kasoo baxay Wasaaradda Caafimaadka dowladda ee xilgaarsiinta ayaa waxaa lagu sheegay in ujeedka tallaalkan loo keenay dalka ay tahay in Soomaaliya laga saacido ka hortagga Caabuqa halista ah ee COVID-19.
Wasaaradda ayaa sheegtay in keenista qaybtaan labaad ee tallaallada Astrazeneca ee COVID-19 ay ku soo aaday, iyadoo lagu guda jiro waqti xasaasi ah oo uu COVID-19 soo laabaty markii 3aad, isla markaana lagu joojin karo in la tallaalo dadweynaha.
Ugu dambeyn Wasaaraddda Caafimaadka xilgaarsiinta ayaa waxaa ay uga mahadcelisay Dowladda Faransiiska deeqdan tallaalka, waxaana loogu baaqay dhammaan Shacabka Soomaaliyeed in ay qaataan Tallaalka.
Maqaal horeMadaxweyne Uhuru Kenyatta oo Dhambaal u soo diray Farmaajo
Maqaal XigaGuddiga Xalinta Khilaafaadka Doorashooyinka oo ku wajahan Galmudug iyo ujeedka safarkooda